Söpo oo tababarro ka dhan ah shuftada internet-ka siineeysa xisbiyadda dalka | Somaliska
Waxaa meelo badan oo caalamka ka dhacda in shuftada ama tuugga caalamiga ah ee ka qaraabta aaladda internet-ka ay jabsadaan kombiyuutaradda gacantana ku dhigaan badanaa faaylal xasiisi oo quseeya xisbiyadda iyo siyaasisiinta caalamka.
Sidaas aawadeed ayaa ciidanka ammaanka u qaabilsan dalkaan Iswiidhan ee Söpo, waxaa ay bilaabayaan tababaro la siinayo siyaasiinta iyo xisbiyadooda si ay uga gaashaantaan shuftaadas jabsata xoggaha xisbiyadda. Waana mid loo arka ineey tahay muhiim meeshii ugu sareeysay ah.bTababaraddan oo sanadkii ina dhaafay bilaabay ayaa haatan si ramsi ah loo gudo galay. Tanina waad loogu diyaar garoobayo doorashadda soo socda oo ay sanad uun keliya ka hareen xisbiyadana ay si weyn ugu diyaar garoobayaan ka qeyb qaadashadeeda.
“Waxaa dhici karta in loo arko in ay deg gesiimo tahay tababaradan, hase ahaatee qibradaha caalamiga ah ee laga dhaxgalay weeraradda xagga aaladda internet-ka loo geeystay xisbiyada xilliga doorashadda ayaa soo jirtay muddo dheer” Sidaas waxaa yiri Fredrik Agemark, oo ah madaxa hey’addda bad baadada ee ciidanka ammaanka.
Su’aalaha ku heereeysan weeraradda ka dhanka ah asxaabta siyaasadeed ee caalamka ayaa haatan gaartay halkii ugu sareeysay.Iyadoo kooxaha shuftada ahi ay gacanta ku dhigeen dokumentiyo iyo feeylal aad xasaasi u ah. Waxaa la xasuusan yahay sameeynta ay arrintaani ku yeelatay doorashadda Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska oo ay haatan soo baxeen tuhumo ah in Ruush-ku uu saameeyn weeyn ku yeeshay.
“Sidaa daraadeed ayaa tababararkaan lugu doonayaa ineey aqoon u yeelan karaan xisbiyadda haddii la soo wajaho xilliga doorashadda” ayuu yiri markale Fredrik Agemark” oo intaa hadalkiisa ku daray in diyaar looogu noqdo halka weerarada ka imanayaan. Wuxuu sidoo kale aaminsan yahay warbixinadda la xirriira teknoolajiyadda ay maanta aad muhiim u tahay. Ugu dambeyntiina dhamaan xisbiyadda dalka ee ku jira baarlamaanka ayaa tababarkaan ka qeyb qaadanaya.